Cashirkii 2aad: Maamulka Ganacsiga Caalamiga, Aas-aaska Ganacsiga |Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 12, 2016
F.G: Fadlan soo aqri cashirkii 1aad………….
Marka horre waa wax aad u wanaagsan inaan fahano faah-faahinta aas-aasiga ganacsiga. Ganacsiga wuxuu leeyahay noocyo kalla duwan waxaana cashirkeena labaad ku sharaxi doonaa noocyada kalla duwan ee ganacsiga iyo sawabaha loo aas aaso. Balse marka horre waxaa wanaagsan inaan qeexno waxa loo yaqaano ganacsi. Waa maxay ganacsi?
Aad ayay u wanaagsan tahay marka horre inaan si fiican u qeexi karto waxa loo yaqaano ganacsi. Waxaad marar badan dhagahaaga ku soo dhaceen ganacsi. Soomaalida waxay u badanyihiin dad Illaahay ganacsiga u siiyay haybad. Soomaalida ayaa waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad aad ugu fir-fircoon xagga ganacsiga. Hadaba koorsadaan la magic baxsay Maamulka ganacsiga caalamiga waxaan ku qeexi doonaa noocyada ganacsiga iyo guud ahaan isbar-bardhigida markuu ganacsigaada yahay mid caalami iyo mid maxali ah. Dhammaan arrimahaas waxaan ku qeexi doonaa koorsooyinka kale ee nagu soo wajahan. Aan usoo noqdo marka mawduuca cashirkeena ku saabsanaa aas-aaska ganacsiga.
Iskaashi (partnership) waa ganacsi ay leeyihiin laba qof ama ka badan. Iskaashiga micnihiisa waa in waxwalbo la wadaago sida deymaha, rasamaalka ay leedahay shirkadda, macaamiilka, dejinta go’aamada, iyo guud ahaan in la wadaago faa’iido iyo qasaaro. Waxaa jiro saddex nooc oo iskaashi. Saddexda nooc ee ugu badan iskaashiga waxay kalla yihiin iskaashi faa’iido-doon, iskaashi guud iyo iskaashiga xadidan.
La soco cashirkii 3aad……………..
Tags: Aas-aaska Ganacsiga |Tukesomalism.comCashirkii 2aad: Maamulka Ganacsiga Caalamiga
Next post Dhibaatada Cabidda Sigaarka Uleeyahay Jirka|TukeSomalism.com
Previous post Waa Kumaa Nebi?